Enyere asambodo Green Globe na LUX * Resorts & Hotels
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Enyere asambodo Green Globe na LUX * Resorts & Hotels
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ Maldives na -agbasa • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ulọ oriri na ọ .ụ Lụ LUX-na-Hotels
Green Globe kelere LUX * Resorts & Hotels na inweta asambodo na ngalaba 8 na Mauritius, La Réunion & Maldives.
Green Globe kelere LUX * Resorts & Hotels na enyere ha asambodo nnabata ha. Ihe asatọ ahụ dị na Mauritius, La Réunion na Maldives bụ LUX * Belle Mare, LUX * Le Morne, LUX * Grand Gaube, Tamassa, Merville Beach, LUX * Saint. Gilles, Hôtel Le Récif na LUX * South Ari Atoll.
Paul Jones, Chief Executive Officer of LUX * Resorts & Hotels kwuru, “Asambodo na-aga nke ọma pụtara na atụmatụ mmepe anyị na-adigide malitere afọ ole na ole gara aga dị n’ụzọ ziri ezi. Ọ na-egosiputa ntinye nke ndị otu anyị niile na-enye ọrụ dị mma ma na-agbaso ụkpụrụ LUX * na ụkpụrụ omume, na-agbasi mbọ ike maka ọchịchị ọma, ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịmara gburugburu ebe obibi, na-akwalite ohere nha anya n'akụkụ nkwanye ùgwù maka ikike mmadụ.
Ezi ọchịchị, nghọta na ịza ajụjụ bụ ihe dị n'etiti atụmatụ mmepe mmepe nke LUX * na nke a na-eme ka a hụ mbibi a na-akọ n'ihu ọha na LUX * GRI Standards Integrated Annual Reports. Nkwenye nke mpụga maka izi ezi nke ozi niile edepụtara. LUX * bụ akụkụ nke Global Reporting Initiative (GRI) Gold Community, na-ahazi ọdịnihu nke International Standards Report Standards. Na 2017, LUX * malitere usoro GRI na Mauritius na mmekorita ya na ndị nwere oke ego.
Ngwongwo LUX * ọ bụla nwere njikọ na njikọta gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ndị mmekọ, oge niile na-etinye aka na iji akụ na ụba arụ ọrụ.
LUX * Nkwado Kọmitii
Kọmitii na-akwado nkwado na-arụ ọrụ na egwu egwu nke otu ụzọ atọ nwere isi, na-eme ka ọkwa dị elu gafee ụlọ ọrụ ahụ, na-asọpụrụ nkọwa nke ebe dị iche iche. Kọmitii ahụ na-akọrọ ibe ha nkwado, na-akwadebe ọnụ maka nyocha site na ọgbakọ webụ yana na nzukọ mmadụ, na -ekọrịta ụzọ kacha mma na echiche. Kọmitii ahụ n'okpuru nlekọta nke Group Sustainability & Corporate Social Responsibility Manager Oriakụ Vishnee Sowamber nwere ọkachasị nke Quality Assurance na Training Managers, nke nwere ezigbo ịnụ ọkụ n'obi banyere mmepe na-aga n'ihu. Ntinye aka ha na nkwado nke saịtị na-achota oganihu n'ile ha anya na Ray nke Light na-akpali ndi gbara ha gburugburu.
Na Mauritius, LUX * na Mauritian Wildlife Foundation na-ekesa osisi 1,200 dị egwu nye ndị otu, ndị obodo, ụlọ akwụkwọ, ndị NGO na ndị nwere oke. Na mgbakwunye, LUX * Corporate & Resorts esonyela na UNDP GEF na FORENA iji kụọ osisi 140 dị egwu na saịtị akụkọ ihe mere eme na obodo Port Louis. LUX * na-akwadokwa ịkọ ahịhịa na mpaghara Blue Bay iji chekwaa ụdị mmiri dị iche iche.
LUX * Saint Gilles na Hôtel Le Récif na-akwado NGO, ReefCheck France, ego iji kwalite ọrụ ha ROUTE DU CORAIL © nke na-arụ ọrụ ọdụ abụọ nke na-akwado mmepe na-adịgide adịgide nke akuku mmiri na okike ya. LUX * Saint Gilles na-akwadokwa Reserve Marine de La Reunion iji kụziere ndị ọbịa na ndị otu egwuregwu banyere anụmanụ na mmiri na nchekwa osisi.
LUX * South Ari Atoll (Maldives) nwere ebe a na-ahụ maka mmiri na-ahụ maka mmiri iji mụọ ma chebe ụmụ amaala whale shark. Onye na-ahụ maka mmiri, bụ onye ọkachamara n'ihe banyere nchebe azụ shark site n'aka ndị ọchịchị Maldivian, na-akụzi ndị ọbịa na njem mmụta gburugburu ebe obibi ma na-akwado nyocha sayensị na-aga n'ihu. Ndị ọrụ Center bụ ihe dị mkpa iji wepụ ụgbụ mmiri site n'oké osimiri, nke na-egbu ọtụtụ ihe ndị dị na mmiri ma mepụta akwara mmiri iji kwado ndụ mmiri. Centerlọ Ọrụ ahụ na-akwado Olive Ridley Project (Marine Conservation Charity), Maldives Whale Shark Research Program (Marine Conservation Charity), Manta Trust (Marine Conservation Charity) na Shark Watch Maldives.
Green Globe bụ usoro nkwado nke ụwa zuru ụwa ọnụ dabere na njirisi akwadoro nke mba ụwa maka ịrụ ọrụ na njikwa nke njem na njem nleta. Arụ ọrụ n'okpuru ikikere zuru ụwa ọnụ, Green Globe dị na California, USA ma na-anọchite anya ya na mba 83. Green Globe bụ onye mmekọ nke United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Maka ozi, biko gaa na griin.com.